On1.click | ဒတ်နတ်
... ဒတ်နတ် (Deneb) သည် ဆိုင်နပ် ကြယ်စုတန်းမှ ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် Summer Triangle ဟ...
ဤဆောင်းပါးသည် ကြယ် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြားအသုံးအနှုန်း အတွက် နတ် ကို ကြည့်ပါ။
ဆိုင်နပ် ကြယ်စုတန်းရှိ ဒတ်နတ်
20° 41′ 25.9″
1.25 (1.21–1.29 )
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) −4.5 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: 1.99 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 2.29 ± 0.32 mas
အကွာအဝေး 7003261500000000000♠2,615±215 ly
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) −8.38
ဒြပ်ထု 7001190000000000000♠19±4 M☉
အချင်းဝက် 7002203000000000000♠203±17 R☉
တောက်ပမှု 7005196000000000000♠196,000±32,000 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 7000110000000000000♠1.10±0.05 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 7003852500000000000♠8,525±75 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] −0.25 dex
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 7001200000000000000♠20±2 km/s
ဒတ်နတ် (Deneb) (/ˈdɛnɛb/) သည် ဆိုင်နပ် ကြယ်စုတန်းမှ ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် Summer Triangle ဟုခေါ်သော ကြယ် ၃ လုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုင်နပ် ကြယ်စုတန်းတွင် အတောက်ပဆုံးကြယ်၊ ညဘက်ကောင်းကင်ယံတွင် ၁၉ စင်းမြောက် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ ဒတ်နတ်သည် ရီဂျယ်ကြယ်နှင့် အတောက်ပဆုံးကြယ်နေရာတွင် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယင်း၏အကွာအဝေးနှင့် တောက်ပမှုကို သေချာမသိရပေ။ ဒတ်နတ်၏ တောက်ပမှုမှာ နေ၏တောက်ပမှုထက် အဆပေါင်း ၅၅၀၀၀ နှင့် ၁၉၆၀၀၀ ကြားတွင်ရှိသည်။ ဒတ်နတ်သည် ကမ္ဘာမြေမှ ၈၀၂ parsec (၂,၆၂၀ အလင်းနှစ်) ခန့် ကွာဝေးသည်။
↑ Merriam-Webster, Inc (1998)။ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary။ Merriam-Webster။ ISBN 978-0-87779-714-2။
12345 "Validation of the new Hipparcos reduction" (2007). Astronomy and Astrophysics 474 (2): 653–664. doi:10.1051/0004-6361:20078357. Bibcode: 2007A&A...474..653V.
123 "VizieR On-line Data Catalog: Catalogue of Stellar Photometry in Johnson's 11-color system" (2002). CDS/ADC Collection of Electronic Catalogues 2237: 0. Bibcode: 2002yCat.2237....0D.
12"VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007–2013)" (2009). VizieR On-line Data Catalog: B/GCVS. Originally Published in: 2009yCat....102025S 1: 02025. Bibcode: 2009yCat....102025S.
↑ "Anchor Points for the MK System of Spectral Classification" (1993). Bulletin of the American Astronomical Society 25. Bibcode: 1993AAS...183.1710G.
↑ "Pulkovo Compilation of Radial Velocities for 35 495 Hipparcos stars inacommon system" (2006). Astronomy Letters 32 (11): 759–771. doi:10.1134/S1063773706110065. Bibcode: 2006AstL...32..759G.
1234"Quantitative spectroscopy of Deneb" (2008). Astronomy & Astrophysics 479 (3): 849–858. doi:10.1051/0004-6361:20078590. Bibcode: 2008A&A...479..849S.